I-Covid – igciwane eliguqule konke | Scrolla Izindaba
I-Covid – igciwane eliguqule konke
Igciwane elincane elinama-spikes adluliswe yilulwane aya kumuntu lasondela ekubhubhiseni umnotho womhlaba.
I-Covid ihamba phambili ohlwini lwezinto ezenze unyaka wezi-2020 waba yiphupho elibi.
Cishe babeyizigidi ezimbili asebeshonile emhlabeni wonke kuze kube manje, abayizi-25 000 babo baseNingizimu Afrika.
Ezomnotho namabhizinisi kwachitheka.
Izigidi azisebenzi. ENingizimu Afrika kuphela, abantu abayizigidi ezintathu balahlekelwa imisebenzi ezinyangeni ezimbili zokuqala zemithetho yomvalelo.
Kwabayinto enkulu kakhulu esikhathini sethu sokuphila, ngemuva kokuwa kobandlululo nokuwa kodonga lwase-Berlin.
Lesi sifo saba uvivinyo olukhulu kohulumeni. Amazwe aseAfrika enze kangcono kakhulu kunamanye, eholwa yiNingizimu Afrika.
Wonke amazwe enza amaphutha. ENingizimu Afrika yenza umvalelo omkhulu kwezinye izindawo, wenza kancane kwezinye. Futhi nokuqhamuka nemithetho ethe xaxa efana nokuvinjelwa kokubhema, ngenkathi uvumela amaphoyisa namasosha ukuthi baqinise isandla kakhulu.
I-Covid inokungalingani okune-turbocharged eNingizimu Afrika, nakulo lonke izwekazi. Abacebile kwezinye izimo baceba kakhulu. Labo abangasebenza ku-inthanethi bebengenankinga. Abampofu bahlupheke kakhulu.
Ochwepheshe abaningi bathi lesi sifo sizoshintsha indlela esiziphatha ngayo unomphela.
Lapho nje umuthi wokugoma ukhishwe kahle, ingabe sizobuyela emikhubeni yethu yakudala?
Kungasithatha okungenani omunye unyaka ukuthola, okusho ukuthi lolu bhubhane aluphelile ngokwanele.
Ingozi enkulu kunazo zonke eya phambili enye inguquko – esivele ikhona etholakala eNingizimu Afrika naseBrithani, esabalala ngokushesha okukhulu.
Kungenzeka yini ukuthi okunye ukuguquka kwenze leli gciwane libulale kakhulu? Kungenzeka yini ukuthi sedlule kalula?